नेपालको राजनिति र समाजको विकास, जनजाति महासंगको उदेश्य-खुसी लिम्बु « Phidim Today
नेपालको राजनिति र समाजको विकास, जनजाति महासंगको उदेश्य-खुसी लिम्बु
Published on:4February, 2019 2:17 am
खुसी लिम्बु थर्पु समाज युकेका उपाध्यक्ष हुन । युकेमा रहेका नेपाली बिशेष गरेर पाँचथरबासी र तिनका समस्याका बिषयमा गरिएको कुराकानी आजको टुडे संवादमा ।
के सिलसिलामा नेपाल आउनु भएको हो ?
थर्पु समाज युकेले करिब १६ लाखको लागतका पुस्तकालय निर्माण गरेर थर्पु क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अनुसार म परिकल्पना कार भएको नाताले समाजले मलाई यहाँ पठाएको हो ।
तपाई धेरै संस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ । यो के को लागि हो ?
समान्यतया म समाजिक सेवामा संलग्न रहन्छु । बाँकी रहेको समयमा आफ्नो परिवार तथा अफिसमा रहन्छु । कतिपय समयमा कतिपय जिम्मेवारी सुवाउँदो व्याक्तीलाई दिने गरेको छ । मलाई समाजले विस्वास गरेर सुहाउँदो पदमा रेखेको हो । कुनै पद वा संस्थामा मेरो इच्छा भन्दा आवस्यकता नै धेरै हो ।
संस्था स्थापन गर्नु पद बनाउनु भनेको एक प्रकारको राजनिति गर्नु जस्तो हो तपाईहरु खास काम चै के गर्नु हुन्छ ?
जनजाति महासंगको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा समानता र समतामुलक समाजको स्थापना गर्नको लागि हामीले बेलायतमा रहेर पनि नेपाल प्रतिको माया, नेपालको राजनिति, नेपालको समाज नेपालको व्यावस्था प्रतिको विस्वास रहेको छ । हामी बेलायतमा बसेर पनि नेपालको राजनिति र समाजको विकास गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले जनजाति महासंगको स्थापना गरेका हौँ ।
जस्तै बेलायतमा पनि पाँचथरका २ यस ५५ परिवार हामी बसोबास गर्ने गरेका छांै । पाँचथरमा हुने विभिन्न कृयाकलापहरु जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, खेलकुदको क्षेत्र तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हुने अवसर र कार्यक्रममा हामी सहयोग गर्छौ ।
नेपालको धेरै जनसंख्या बेलायतमा छ । उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहुच कस्तो छ ?
राजनीतिक पक्षमा भन्नु पर्दा दोस्रो पुस्ताको नानिहरुको राजनीतिक आस्था नेपालसंग छैन । उनिहरु भाषा, सस्कारले गर्दा, उनिहरुको पढ्इ रहन सहन फरक भएको कारणले गर्दा नेपाल भन्दा टाढा नै रहेका छन । हामी पहिलो पुस्ता भएको कारणले हामी नेपालमा जन्मीएको कारणले गर्दा यहाँको रहनसहन भन्दा नेपालको रहन सहनमा नै भिजेको हुनाले हामीालाई नेपालको राजनीतिब ुझन सहजभएको हो । त्यहाँ पनि सोही अनुसार छ ।
सामाजिक कार्यका लागि सहयोग कहाँबाट जुटाउनु हुन्छ ?
हरेक समाजले विभिन्न ठाँउमा मिलेर थोरै–थोरै रकमउ ठाएर हामीले नेपालमा पठाउने गरेका छांै । नेपालमा गरीने विभिन्न सहयोगहरु च्यारीटिबाट धेरै मात्रमा गरिदै आएको छ । कार्यक्रम गर्न नसक्दा विभिन्न समाजिक संजालको प्रयोगबाट पनि ग्रुप बनाएर सहयोग गरिदै आएको छ ।
तपाईहरुले गरेको सहयोग कतिको सदुपयोग हुने गरेको छ ?
हामीलाई दातहरुले दिएको सहयोग संघ सस्थाहरुले उचित रुपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । जस्को जिम्मेवारी संस्थाहरुमा भर पर्छ । हामी बेलायतमा च्यारीटि गर्न संस्थाहरुको बैक एकाउन्ट हुने गर्छ र संकलित रकम राखिएको हुन्छ ।
बेलायतका नेपालीहरुले कतिको सिर्जनशिल भएर काम गरिरहेका छन् ?
नेपालीहरुले सिर्जनशिल भएर काम गरिरहेका छन । तर एक भएर काम गर्नु पर्ने ठाँउमा अलिक जातिय हिसावमा, वर्गी हिसावमा अलिक धुर्विय भएको जस्तो लाग्छ । ठुलो सम्मेलनमा जति उपस्थीत हुनु पर्ने हो त्यति मात्रमा हुन सकेको छैन ।
जति उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्ने हो त्यति लगानी हुन सकेको छैन किन?
लगानी भनेको आर्थिक रुपमा मात्र नभई विभिन्न समाजिक सेवा, सिप, बिवेक तथा बेलायतबाट आएपछि नेपालमा आफ्नो क्षमता अनुसार नेपालको विकस र प्रगतिको लागि नेपाललाई टोवा पुर्याउनु पनि लगानि अन्तर्गत पर्छ ।